GAZZETTA: AC Milan oo qarka u saaran Alvaro Morata + Sawirro – Gool FM
GAZZETTA: AC Milan oo qarka u saaran Alvaro Morata + Sawirro
(Milano) 17 Luulyo 2017 – Milan ayaan u muuqanin mid istaagaysa, iminkana waa Alvaro Morata oo isna ku biiri kara AC Milan – oo kooxaha Yurub kaga yaabsatay inay ilaa haatan suuqa ku bixisay 211MILYAN oo euro xagaagan.
Sida ku dhigan Gazetta dello Sport, AC Milan ayaa usii dhowaanaysa heshiis ay ku qaadato laacibkaasi kaasoo ah 70 milyan oo euro ama £61m oo gini, iyadoo laacibka todobaadkii siinaysa £170,000 oo gini.
Haddii uu Morata u wareego San Siro wuxuu kharashka uu naadigu khasiray ilaa haatan gaari doonaa ku dhowaad 300MILYAN oo euro xagaagan oo qura.
Chelsea iyo Manchester United, oo laacibka aad loola xiriirinayay xagaaga oo idil ayaa loo sheegay inay £80m oo gini miiska soo saaraan haddii ay doonayaan 24-jirkan reer Spain.
Milkiilaha cusub ee AC Milan Mr Yonghong Li oo shalay ka hadlayay xaflad lagu saxiixayay heshiis wada shaqayneed oo ay AC Milan la gashay hay’ad Chinese ah ayaa yiri: ”Xitaa waxaan ka yaabin doonnaa taageerayaasheenna”.
Man United oo gacanta midig ku dhigtay Ivan Perisic, Inter oo bedelkiisa heshay (Imisa ayay ku iibsatey?)